DataNumen Outlook Express Repair - मेल फोल्डरमा पुन: प्राप्ति सन्देशहरू आयात गर्नुहोस् Outlook Express
घर उत्पादन DataNumen Outlook Express Repair मेल फोल्डरमा पुन: प्राप्ति सन्देशहरू आयात गर्नुहोस् Outlook Express
मेल फोल्डरमा पुन: प्राप्ति सन्देशहरू आयात गर्नुहोस् Outlook Express
नोट: आयात अपरेसन अघि, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् Outlook Express मेल फोल्डर जहाँ सन्देशहरू आयात गर्न सकिन्छ सहि कार्य गर्दछ। अन्यथा, कृपया ब्याकअप गर्नुहोस् र dbx फाइल मेटाउनुहोस् मेल मेलसँग सम्बन्धित।
Start Outlook Express र यसलाई खुला राख्नुहोस्।
आउटपुट डाइरेक्टरीमा आयात गर्न सबै सन्देशहरू चयन गर्नुहोस्।
टिप: सन्देश फाईलहरूको समूह छनौट गर्न, शिफ्ट कुञ्जी होल्ड गर्नुहोस्, समूहको माथिको सन्देश फाईल क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि समूहको तल सन्देश सन्देश फाईल क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले पहिल्यै सेलेक्ट गर्नुभएका समूहमा सन्देश फाईलहरू थप्न, CTRL कुञ्जी होल्ड गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईंले थप्न चाहानु भएको सन्देश फाइलहरू चयन गर्नुहोस्। चयनित सन्देश फाइलहरू बहिष्कार गर्न, CTRL कुञ्जी होल्ड गर्नुहोस्, र त्यसपछि चयनित सन्देश फाईलहरू क्लिक गर्नुहोस्।
डाइरेक्टरीबाट चयनित सन्देशहरू तान्नुहोस्।
मा सन्देश ड्रप गर्नुहोस् tarखुला फोल्डरमा मेल फोल्डर प्राप्त गर्नुहोस् Outlook Express.
त्यस पछि, तपाईले आयात गरिएको सन्देशलाई सामान्यमा जस्तै अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ Outlook Express.
चरण १, २, the आयात प्रक्रियामा निम्न एनिमेसनमा चित्रण गरिएको छ।